Arkiifiyada Wararka - CasinoAdvisor.eu
SlotVision waxaa helay GameArt Limited
20-05-2022 - Qaybta horumarinta ciyaaraha ee warshadaha khamaarka khadka tooska ah waxaa ka buuxa waxyaabo cusub maalin kasta, oo hadda waxaan haynaa war deg deg ah mar kale. Kaliya laba maalmood ka dib markii la sii daayay 3-ambadeen cusub, 5-payline video Afyare loo yaqaan Striking Joker, horumarinta ciyaaraha casino online Malta GameArt Limited ku dhawaaqay in ay heshay SlotVision Limited. Afyare… Continue reading SlotVision waxaa helay GameArt Limited
Kala sooc sida News
Yggdrasil iyo Peter & Wiilasha Isbarashada - Biyaha Blox GigaBlox
2022-05-19 - Mid ka mid ah magacyada loogu kalsoonaan karo ee warshadaha ciyaaraha khadka tooska ah - Yggdrasil ayaa ku dhawaaqay inay soo saartay boos cusub oo fiidiyoow ah oo ay weheliso lamaanaheeda YG Masters Peter & Sons. Waa cinwaanka labaad ee istuudiyaha horumarinta ee ku daray GEM-ka caanka ah Fiidiyowgan ku shaqeeya GATI… Continue reading Yggdrasil iyo Peter & Wiilasha Isbarashada - Biyaha Blox GigaBlox
Casino Energy Soo bandhigaysaa ay Friday Live Casino Bonus reload
2022-05-13 - Gunnooyinka iyo dallacaadaha ayaa ah waxa ku sii haya khamaarka khadka tooska ah, ciyaartoyduna si la fahmi karo ayay u faraxsan yihiin mar kasta oo goobta ay soo bandhigto xayeysiis cusub. Suuqa khamaarka khadka tooska ah waxaa ka buuxa casinos online ah oo la isku halayn karo, markaa goob kasta waxay u baahan tahay inay hal abuur yeelato si loo hubiyo in punters ay daacad u ahaadaan astaanta. Ciyaartoyda la doortay waxay leeyihiin… Continue reading Casino Energy Soo bandhigaysaa ay Friday Live Casino Bonus reload
iSoftBet soo bandhigay Jokers Dahab ah Double Up
2022-05-12 - Warshadaha khamaarka khadka tooska ah ayaa sii kordhaya maalin kasta oo dhaafa, anagoo markhaati ka nahay noocyada cusub ee ciyaaraha ee la sii daayo si joogto ah. Slots ayaa lagu doodi karaa in ay yihiin qaybta ciyaaraha loogu ciyaaro casino kasta oo online ah, iyada oo aan loo eegayn suuqa uu ka shaqeeyo. Ciyaartoyda qaarkood ayaa magac u yeeshay iyaga oo ah Continue reading iSoftBet soo bandhigay Jokers Dahab ah Double Up
Mr Play waxa uu bilaabay Tartan Cusub oo ay iska kaashanayaan Hacksaw
2022-05-06 - Mid ka mid ah casinos online-ka ugu kalsoonaan karo ee warshadaha - Mr. Play, ayaa bilaabay xayeysiis cusub oo shaqeynaya ilaa 11-ka May. Waxaa loo yaqaan "Tartanka Hacksaw", iyo, sida magacu tilmaamayo, waxaa la kaashanaya bixiyaha ciyaarta-sidaa la isku halleyn karo. Tartanka Hacksaw wuxuu u oggolaanayaa 100 ciyaartoy inay ku guuleystaan ​​​​wanaagsan… Continue reading Mr Play waxa uu bilaabay Tartan Cusub oo ay iska kaashanayaan Hacksaw
Dhowr casinos oo khadka ah ayaa lagu ganaaxay Netherland's KSA Regulator
2022-05-05 – Suuqa khamaarka Nederland waa mid aad ugu cusub, dowlada wadankana waxay ku faantaa sida wanaagsan ee ay u soo abaabushay. Khamaarka khadka tooska ah waa sharci wax ka yar hal sano, iyo hay'adda u xilsaaran kormeerka dhammaan warshadaha khamaarka ee Nederlaan waa Kansspelautoriteit (KSA). KSA… Continue reading Dhowr casinos oo khadka ah ayaa lagu ganaaxay Netherland's KSA Regulator
Pariplay waxay ku daraysaa Spinberry barnaamijkeeda Ignite
2022-04-30 Iyadoo la raacayo dhawr heshiis oo sahayda nuxurka ah mudooyinkii u dambeeyay, Pariplay, oo ah hoosaad ka tirsan Aspire Global ayaa ku dartay lamaane cusub barnaamijkeeda qaybinta ciyaarta Ignite. Spinberry waa istuudiyaha horumarinta ciyaaraha ee cusub, waxayna si cad u soo jiidatay dareenka Pariplay, marka waxaa la siiyaa fursad ay ku sameyso… Continue reading Pariplay waxay ku daraysaa Spinberry barnaamijkeeda Ignite
Play'n GO wuxuu siidaayaa Puebla Parade - Cinco de Mayo Special
2022-04-27 - Cinco de Mayo waa mid ka mid ah ciidaha ugu muhiimsan jadwalka Mexico. Waa dabbaaldegga sannadlaha ah oo lagu xusayo sannad-guuradii ka soo wareegtay guushii uu waddanku ka gaaray Boqortooyadii Faransiiska ee Dagaalkii Puebla ee sannadkii 1862-kii. Dadka Meksikaanka ah ayaa aad ugu riyaaqay dabbaaldeggan, waxayna ku dhowdahay waqti ka mid ah ... Continue reading Play'n GO wuxuu siidaayaa Puebla Parade - Cinco de Mayo Special
Ciyaarta nasashada ayaa ku dhawaaqday Jurassic Party Video Slot
2022-04-22 - Ciyaarta nasashada waa mid ka mid ah magacyada ugu caansan warshadaha horumariya ciyaarta, marka marka ay ku dhawaaqaan, waxay helaysaa dareen badan. Markaa, horumariyaha ciyaarta Malta ayaa mar kale qabsaday cinwaannada wararka qaarkood. Waxay ku dhawaaqday inay dib u qaadi doonto punters waqti ka dib si ay u… Continue reading Ciyaarta nasashada ayaa ku dhawaaqday Jurassic Party Video Slot
IGT Waxay dejisay inay iSoftBet ku hesho €160 Milyan
2022-04-22 – IGT (International Game Technology) ayaa ku dhawaaqday war deg deg ah todobaadkan. Waxay sheegtay inay gashay heshiis kama dambays ah si ay u hesho bixiyaha ciyaaraha iyo ururiyaha kooxda saddexaad ee iSoftBet ku dhawaad ​​€160 milyan ($ 174.1) oo lacag caddaan ah. Waa warka ka soo yeeray adduunka khamaarka khadka tooska ah waana hubaal inuu soo jiidan doono… Continue reading IGT Waxay dejisay inay iSoftBet ku hesho €160 Milyan
Page 1 ... Page 4 Older posts